Antonio Conte oo ku dhow inuu ka shaqo bilaabo mid ka mid ah kooxaha waaweyn ee Yurub – Gool FM
Antonio Conte oo ku dhow inuu ka shaqo bilaabo mid ka mid ah kooxaha waaweyn ee Yurub
(England) 16 Abriil 2019. Kooxo badan oo caalami ah ayaa doonaya inay shaqaalaysiiyaan macalinka reer Talyaani ee Antonio Conte, si uu u leeliyo laga bilaabo xili ciyaareedka soo socda.
Kooxaha ugu cad cad ee lala xiriirinayo Antonio Conte ayaa kala ah Inter Milan iyo Bayern Munich, kuwaasoo isku diyaarinaya inay qaadaan talaabooyinkii ugu horeeyay ee lagu soo afjarayo heshiiska macalinkii hore kooxda Chelsea xagaaga soo aadan.
Sida laga soo xigtay wargeyska caanka ah ee reer Talyaaniga “Corriere dello Sport” kooxda Bayern Munich ayaa isku diyaarineysa inay dalab lacageed u soo bandhigto Antonio Conte.
Kooxda Bavarian-ka ayaa qorsheyneysa inay shaqada ka ceyriso macalinkooda haatan ee Niko Kovač, kaasoo ku guuldareystay in kooxda uu gaarsiiyo heerka ugu sareeya ee tartanka Champions League.
Antonio Conte ayaa ilaa iyo haatan qaadanin go’aan kama dambeys ah ee quseeya mustaqbalkiisa, sababtoo ah wuxuu jecel yahay in si taxadir ah uu qiimeyn ugu sameeyo, halka uu ka shaqeyn doono, kadib markii uu joojiyay shaqada tababarka xilli ciyaareedkan.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in kooxaha Inter Milan iyo Roma ay isku dayayaan inay ku guuleystaan ​​soo xero galinta adeega Conte, lakiin isku daygooda ayaa u muuqda mid la yaab leh. Inkastoo Nerazzurri ay aamusan tahay, hadana kooxda ka dhisan caasimada ee Roma ayaa isku dayeysa in si xoogan ay diirada u saarto sida ay ku heli lahayd macalinka reer Talyaani inkastoo ay tahay shaqo aad u adag.
Sida laga soo xigtay ilo wareedyo isku mid ah, Antonio Conte ayaa ku dhow inuu ku biiro kooxda Bayern Munich, waxaana la filayaa in loo muujiyo rabitaan weyn si uu u aqbalo dalabka kooxda reer Germany.
Kompany oo ka jawaab celiyay wararka xanta ah ee lala xiriirinayo inuu ka tagayo Manchester City
Maxamed Saalax oo Sharaxaad ka bixiyay Dabaal degii uu ku sameeyay Chelsea